महिला क्रिकेट : प्रदेश नं. १ फाइनलमा, लुम्विनीसंग भिड्ने – Gandaki Voice
Home/खेलकुद/महिला क्रिकेट : प्रदेश नं. १ फाइनलमा, लुम्विनीसंग भिड्ने
महिला क्रिकेट : प्रदेश नं. १ फाइनलमा, लुम्विनीसंग भिड्ने
लुम्बिनीलाई १० विकेटले हराउँदै प्रदेश १ प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटको फाइलनमा पुगेको छ । दाङको लमहीमा लुम्बिनी प्रदेशले दिएको ५३ रनको सामान्य लक्ष्य प्रदेश १ ले आठ ओभर पाँच बलमा कुनै पनि विकेट नगुमाइ भेटायो ।
उसका लागि रुवीना क्षेत्रीले २६ र काजल श्रेष्ठले २२ रन बनाए । यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको लुम्बिनीले १४ ओभर एक बलमा अलआउट हुँदै ५२ रन बनाएको थियो । उसका लागि नितू भण्डारीले २१ रन बनाउनुबाहेक अरुले दोहोरो अंकमा रन जोड्न सकेनन् ।
प्रदेश १ की निमा तामाङ र संगीता राईले दुई-दुई विकेट लिए । प्रदेश १ ले उपाधिका लागि आइतबार एपीएफसँग खेल्नेछ ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् राखेपको आयोजना तथा नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको प्रादेशिक संरचना लुम्बिनी प्रदेशको व्यवस्थापनमा भएको प्रतियोगिताको विजेताले नगद पाँच लाख प्राप्त गर्ने छ । उपविजेताले तीन लाख र सेमिफाइनलमा पराजित हुने दुई समूहले २५-२५ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् ।
मन्त्री प्रभु शाह सवार गाडीको ठक्करबाट तामाङ घाइते
कारको ठक्करबाट बाघ मर्यो